Yeyiphi imali yedijithali yokuthenga ukuqala ukwenza ipotifoliyo yethu yeasethi ye-crypto | Iindaba zeGajethi
Yeyiphi imali yedijithali oza kuyithenga ukuqala ukwenza ipotifoliyo yethu yeeasethi ze-crypto
Iindaba zeGajethi | | Imali engezantsi yedijithali
Nangona ungasoloko uphila okwembovane ebalini, ayibobulumko ukwenza njengecicada kuphela, kwaye ke ngenxa yoko wenze ixabiso eligciniweyo, nokuba lithobekile kangakanani, alikhathazi. Ukuba nathi siziva sinomdla, sinokukhetha i-asethi yezemali, Imali engezantsi yedijithaliUkuba mncinci asinako ukuyazi ukuba iyaphi, inokuphakama ifane nogwebu, itshone kabuhlungu okanye ifezekise uzinzo olufana nolo luthandwayo yimali ye-fiat (ubuncinci bezemali ezibaluleke kakhulu kwihlabathi).
Ukuba siza kugxila kwezona zibalulekileyo, kunokuba yimali ezintlanu; i-Bitcoin eyaziwayo, abanye abantu thenga i-Ethereum, okanye enye i-Bitcoin Cash, i-XRP okanye iTether. Ezi zintlanu zezokuqala kuluhlu lweemali ezinkulu, ukuba sikhetha ukugxila kwixabiso nge-cryptocurrency nganye inqanaba liya kwahluka kakhulu, ewe, into engatshintshiyo sisikhundla sembeko, esihlala sihleli yiBitcoin.
1 Eyona 5 ibaluleke kakhulu
1.4 I-Bitcoin Cash
Eyona 5 ibaluleke kakhulu
I-Bitcoin (i-BTC) yayiyeyokuqala, yiyo leyo inexabiso eliphezulu ngengqekembe nganye, nge-8.165 yeedola kwi-cryptocurrency nganye nge-Okthobha 9, 2019. Ukongeza, nangona ilahleka emhlabeni njengoko abadlali abatsha bejoyina umdlalo, igxila kubunzima obukhulu bezemali kuzo zonke i-cryptocurrensets, phantse i-147 yezigidi zeedola, ukufumana umbono Ukuxhaswa kwangaphambili kwe-BTC nako kule nto. Inqanaba elilandelayo lenkunzi, u-Ethereum, uqokelela ubunzima bemali obuphantsi kwe-000 yezigidigidi zeedola, kwelinye icala, ekufuneka kuthiwe akukho kubi kwaphela.
Njengengongoma yokugqibela, ukuba unesisa, elona nani liphezulu le-BTC zizigidi ezingama-21, okwangoku phakathi kwe-17 ne-18 lezigidi zazo ziye zembiwa, kwaye akusayi kubakho enye, ke ngoko, uya kukhululeka kwisibetho ye ukunyuka kwamaxabiso kwaye inyusa uphawu lwexabiso lokugcina.
La okwesibini kubango Urhwebo, malunga nokuphela kwesithathu sokuqala sika-Okthobha, malunga ne-176 yeedola nge-Ethereum (i-ETH), ayisiyiyo yesibini ebaluleke kakhulu (ngo-Okthobha u-2019 isenguMenzi, malunga ne-460 yeedola ngengqekembe), kodwa iphakathi elona xabiso, ngubani ongafuniyo ukuba ne-ETH embalwa kwisipaji sabo se-crypto? Nangona phantse zonke ii-cryptocurrensets zingathengwa ngokwahlulwa ngokwazo, oko kukuthi, ungazithenga iiqhezu zazo, akukho mfuneko yokuyithenga iphelele, i-ETH iyasivumela ukuba sifumane yonke iasethi ngaphandle kokuhlawula isixa semali esibaxwayo.
Ngexabiso elihlala lihamba ukusukela ukuphela kukaJuni walo nyaka ujikeleze ikota yedola, i Imali yedatha yedijithali ineemali ezinkulu ezizigidi ezili-12 zeedola.
La Ifom ye-BTC igcina uninzi lodumo lwemali yomzali, kungabikho nto yokurhweba nge- $ 231 enqabileyo ngengqekembe nganye, ucinga ukuba iqale ukurhweba ngonyaka nge-113 yeedola.
Imodeli, kabani Ixabiso langoku lokuthengisa limalunga ne- $ 1, ibotshelelwe kwaye ixhaswe yimali ye-fiat, ekhusela ekungazinzini kwezinye i-cryptocurrensets, kokubini ngokuchasene neengozi kunye ne-spikes ezibukhali, ezinokuthi zingayenzi imali efanelekileyo ukuba ufuna ukuqikelela.
Asazi ukuba kuya kwenzeka ntoni kwixesha elizayo, kodwa into ebonakala iqinisekile kukuba ubuncinci kwi-cryptocurrensets ezifutshane ziya kuba nathi kwaye ziqhubeke nokuphakamisa ukuthanda kunye nentiyo ngokufanayo. Ukuba asiveli kwiqela lesibini, kufanelekile ukuba sithathe ingqalelo yabo njengotyalo mali kwaye silandele iindaba ezinxulumene nabo.
Ukuba baphela ngo-2018 ngaphezulu kwamaxabiso abaninzi babo ababenawo ekuzalweni, kodwa ngezantsi amaxabiso afikelele esiphelweni se2017Inyaniso yokuba ekupheleni kukaJuni i-BTC yayiphindaphinde ixabiso layo ukusuka kwiinyanga ezi-6 ezidlulileyo akufuneki iye ingabonwa, kwaye ukuya kuthi ga kwinqanaba elincinci kunokuthiwa phantse zonke ii-cryptocurrensets ezinkulu.
Ewe oku akuthethi ukuba baya kuvuka kwakhona, kwilizwe lezemali akukho nto iqinisekileyo, kodwa oko kubonakala ngathi kubonisa ukuba, ngokuchaseneyo noko bekucingwa ngabagxeki, ii-cryptocurrensets zisenayo intambo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Te knoloji » Imali engezantsi yedijithali » Yeyiphi imali yedijithali oza kuyithenga ukuqala ukwenza ipotifoliyo yethu yeeasethi ze-crypto
Uyithintela njani i-INE ekubhaliseni indawo okuyo
Eyona miboniso bhanyabhanya ibalaseleyo yokubukela le Halloween kwiNetflix nakwiHBO